Inter Milan oo dharbaaxa xoogan la damacsan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Milano (SONNA). Sida ay shaaca ka qaadeen wararka ka imaanaya gudaha Talyaaniga kooxda Inter Milan ayaa soo bandhigtay liis ka kooban afar ciyaaryahan ee khadka dhexe ah, si midkood ay ula saxiixdaan suuqa furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan.
Nerazzurri ayaa waxay qorsheeneysaa inay buuxiso booskii uu kaga baxay xiddiga reer Belgian ee Radja Nainggolan, kaasoo si amaah ah ugu dhaqaaqay kooxda Cagliari ee isla dalka Talyaaniga.
Warar horudhac ah ayaa waxay sheegayeen in Antonio Conte uu aad u daneynayay xiddiga reer Chile ee Vidal, laakiin wadahadalada heshiiskaas ma aysan dhicin.
Sida laga soo xigtay wargayska “Tuttosport” ee dalka Talyaani afarta ciyaaryahan uu magacaabay tababare Antonio Conte si uu ula saxiixdo midkood ayaa waxaa ka mid ah Ivan Rakitic (Barcelona), Donny van de Beek (Ajax), Nemanja Matic (Manchester United) iyo Milinkovic Savic (Lazio).
Wargayska “Tuttosport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu sii tilmaamay in xulashada ugu qiimaha yar ee afartan xiddig uu yahay xiddiga kooxda Manchester United ee Nemanja Matic, kaasoo qandaraaskiisa Red Devils uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Dhinaca kale Donny van de Beek ayaa ka mid ah xiddigaha ay Real Madrid bar-tilmaameedka ka dhiganeyso, si ay ula saxiixato suuqa kala iibsiga ee soo aadan, ama dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Arrintan ayaa ka dhigeysa in kooxda Inter Milan ay dharbaaxi xoogan la damacsan tahay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, maadaama liiska afartan xiddig ay ku jiraan xiddigaha Ivan Rakitic oo Barca ka tirsan iyo van de Beek oo bar-tilmaameed u ah Los Blancos.
Previous article“Neymar qalad ayuu sameeyay kaddib markii uu baxay, haatanna wuxuu dareemayaa qoomamo” – Messi
Next articleKooxda Muqdisho City Club oo soo bandhigtay Siddeed ciyaartooy oo heer caalami ah